दसैंका विविध सन्दर्भ
दिनेशराज शर्मा आइतबार, कात्तिक ९, २०७७, ०७:२६
एकथरीले दसैं सबैको चाड हो भन्छन्। अर्कोथरी यो मान्यता स्वीकार्न तयार छैनन्। यसो भन्दै गर्दा केही समय अघिको एउटा घटना सम्झिन्छु। गोरे बहादुर खपांगीले दसैंलाई बाहुन क्षेत्रीको चाड हो भनेर विरोध गरेका थिए। तर पछि उनी राजाको मन्त्रिमडलमा गए र टीका थापे।
पहिलेदेखि नै दसैं कसको चाड हो भनेर आवाजहरु उठेका छन्। अन्य जातजातिको हैन भनेर विरोध पनि भएको छ। तर, अधिकांश नेपालीले यो पर्व मानिरहेका छन्। समयअनुसार दसैं मनाउने तरिका पनि फरक हुँदै जान्छ। म यसलाई अन्यथा लिन्नँ। किनभने, संस्कृति भनेको नदी जस्तै हो, बगिरहन्छ। बग्दाबग्दै नदीले दोभानहरु बनाएको हुन्छ। माथि जुन आकारले बगेको थियो, तल पनि उही आकारले बग्छ भन्ने हुँदैन।
त्यसकारण दसैं कसरी मान्ने भन्दा पनि दसैं किन मानियो? दसैंमा गरिने कतिपय चालचलन किन मानिन्छ? र, मेरो घरमा दसैं मान्दा के गरिन्थ्यो, के गरिन्छ भन्ने कुरा यस लेखमा चर्चा गर्नेछुः
ऐतिहासिक दृष्टिमा दसैं
दसैंलाई ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा शक्तिको आराधनाको पर्व हो। दसैंमा गरिने पूजा भनेको विजया यात्रा हो। रामले रावणमाथि विजय गरेको हुनाले हर्षबढाइ गरिएको विजय यात्रा हो। दक्षिण भारत र श्रीलंकातिर रावण पनि पुजिन्छन्।
जनैपूर्णिमा ब्राह्मणको, दसैं क्षेत्रीयको, तिहार वैश्यको, फागू शुद्रको चाड हो भन्ने भनाइ छ। दसैं बहुसंख्यक नेपालीको चाड हो। जनैपूर्णिमा, तिहार र फागुको दाँजोमा दसैंको चर्चा इतिहासमा उति पाइँदैन।
धेरै पहिले झण्डै तीन महिनाको अन्तरमा दसैं हुन्थ्यो। बसन्त ऋतुको चैतमा, गृष्मको असारमा, शरद आश्विन शुक्लमा र शिशिर ऋतुको पुसमा दसैं मानिन्थ्यो। बसन्त ऋतुको र शरद् ऋतुको दसैंको चलन यद्यपि छ। असार र पुसको दसैं हराइसक्यो।
नेपालको इतिहास लिच्छवीकालमा प्रष्ट छैन। लिच्छवीकालका २५० वटा अभिलेख पाइएको छ। ती अभिलेखमा दसैंको चर्चा आएको पाइँदैन। सबै कुरा पाइँदैन। तापनि दसैं मनाइन्थ्यो भन्ने संकेत पाइन्छ।
सक् संवत् ४२५ तदअनुसार विस ५६० को राजा मानदेवको पालाको एउटा शिलालेख भगवतिको चर्चा आएको छ। महिषासुरमर्दिनीको मूर्तीको पादपीठ भएर त्यो अभिलेख छ। मल्लकालीन अभिलेखमा भने कुन दिनमा घटस्थापना गर्ने, कहिले अष्टमी मान्ने कहिले टीका लगाउने चर्चा भएको पाइन्छ। त्यसकारण मध्यकालीन दसैं राम्ररी मानिँदोरहेछ भन्न सकिन्छ।
विजयी यात्रा हो दसैं
इतिहासकार डा महेशराज पन्तले जनैपूर्णिमादेखि रानीपोखरीसम्म (२०७४) भन्ने पुस्तक लेख्नुभएको छ। उक्त पुस्तकमा दसैं सम्बन्धी चर्चा गरिएको छ। त्यही पुस्तकको केही भनाइ म यहाँ लिन्छु।
‘शरद् ऋतुमा विजिगिषु राजाहरुले विजययात्रा गर्ने कुराको बयान पाइन्छ। खोलानाला तर्न सकिने भएपछि र बाटाघाटामा हिलो सुकिसकेपछि शरद् ऋतुमा घोडाको निराजन भन्ने विधि गरिसकेपछि मात्रा राजा रघु विजययात्रा गर्न गएको बयान पाइन्छ।
राजाले विजययात्रा थाल्नुभन्दा अगाडि असोज महिनाको नवौं दिनमा र विजययात्रा पूरा भइसकेपछि तथा घोडालाई रोग लाग्दा वा शान्तिकर्म गर्दा घोडाको निराजन गर्नुपर्छ। चारचार महिनामा ऋतुको सन्ध्याकालीन हात्तीको निराजन गर्नू भनी पाइन्छ।
निराजन विधिमा विजययात्रामा गएको जस्तो अभिनय गरी शत्रुको माटोको मूर्ती बनाइ त्यस मूर्तीको छातीमा शूलले रोप्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख छ। शरद ऋतुमा महाअष्टमीको दिन दुर्गा पूजा गर्नू र दशमीको दिन घोडाको र हात्तीको निराजन गर्नू भनी निराजनको विधि विस्तृत कालिकापूराणमा ८५ अध्यायमा लेखिएको छ।
हाम्रा पुराना शास्त्रहरु कौटिल्य अर्थशास्त्र, रघुवंश, बृहत् संहितामा दसैंको चर्चा नभए पनि निराजना वा निराजनको चर्चा चलिआएकोले तथा कालिका पुराणमा भने शरद् ऋतुमा महाअष्टमीको दुर्गाको पूजा र दशमीको दिन निराजन गर्नुपर्छ भनी उल्लेख भएको छ।
पछिल्लो कालमा निराजन विधि दसैंको अंग हुन गएको देखिन्छ। जुद्ध सडकमा दमकल अगाडि सडकपारीको स्थानमा दसैंको महानवमीको दिन अहिलेसम्म पनि हुने गरेको घोडाहरुको नायक रेवन्तको पूजालाई निराजनकै रुपमा लिन सकिन्छ।’
त्यसकारण दसैं विजय यात्राको प्रतीक हो भन्दा पनि हुन्छ।
देवीको चर्चा पछि भएको हो
अहिले दसैंमा देवीको चर्चा हुने गरेको छ। भारतमा त दुर्गाको विशेष पूजा हुने गर्छ।
देवीको चर्चा वैदिक कालदेखि नै भए पनि हामीले दसैंमा मान्ने गरेको जस्तो देवी भने अलि पछिल्लो कालमा मात्रै चर्चा आएको भेटिन्छ। उदाहरणको लागि मृच्छकटिक ६।२७ मा देवीले शुम्भ र निशुम्भलाई मारेको कुरालाई दसैंमा पाठ गरिने चण्डी प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशतीको ९–१० अध्याय शुम्भ निशुम्वबधसँग जोड्न सकिन्छ।
दसैंमा पाठ गरिने दुर्गा सप्तशती अथार्त चण्डीको पुस्तक नेवार राज्यमा चौधौँ शताब्दीमा देखिन पाएको हुनाले त्यसताकासम्म दसैंको प्रतिष्ठा राम्रै भएको पाउन सकिन्छ।
गोरखादेखि फूलपाती किन ल्याइयो?
मैले ‘गोरखाको इतिहास’ पुस्तक लेख्ने क्रममा गोरखामा नै केही समय बसेको थिए। एक सालको दसैं पनि त्यहीँ मानेको थिए। विभिन्न समयको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यो साल गोरखाको दसैं पनि हेरें।
विस १६१६ मा लमजुङका राजकुमार द्रव्य शाहले गोरखा जिते। गोरखा जितेपछि गोरखाको अर्काे ठाउँबाट बाजा बजाउँदै फूलपातीको दिनमा फूलपाती ल्याइँदो रहेछ। गोरखा दरबार नजिक आइपुगेपछि बाजा बजाउन रोकिने रहेछ। यसको रोचक कारण के रहेछ भने, त्यो स्थानमा आएपछि पनि बाजा बजाउँदा लमजुङेले सुन्छन्, विजयी यात्रामा भड्किन्छ भनेर चलन रहेछ।
त्यस्तै, जब श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं जिते, त्यसरी नै हर्ष बढाइँ गर्दै गोरखादेखि काठमाडौंसम्म फूलापाती ल्याउने चलन बस्यो।
नेपाली सेनाले किन हर्षबढाइँ गर्छ?
मध्यकालदेखि नै नेपालको विभिन्न स्थानहरुमा किल्लाहरु बने। ती किल्लाहरुमा शत्रुले आक्रमण नगरुन् भनेर पुजा गर्ने चलन थियो। सेनाले शक्तिको आरधाना गर्ने भएकाले र दसैं पनि शक्तिको आरधानाको पूजा भएकाले सेनाले दसँैमा विशेष पूजा गरेको हो।
पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि झन् यो क्रम बढेर गयो। किल्ला किल्लामा पूजा गर्ने सप्तमीको दिन बढाइँ गर्ने चलन आएको हो।
मेरो घरको दसैं
दसैंमा काठमाडौंमा चंगा उडाउने चलन थियो। मेरो घरमा भने त्यस्तो चलन थिएन। छाउनीमा गएर पनि चंगा उडाउने चलन थियो। केही वर्ष म पनि घरमा चंगा उडाउन खोज्थें तर बुबालाई मन पर्दैनथ्यो, त्यसैले चंगा उडाउन जानिएन। नौं रात्रा भर तेह्र अध्याय चण्डी पाठ गर्नुपथ्र्यो। अहिले पनि म यो पाठ गर्छु।
वाणी विलास पाण्डेको देवी स्तुती पाठ बेलुका गर्ने हाम्रो घरमा चलन छ। अहिले जस्तो ज्यादै धेरै भीडभाड गरेर देवताको पिठमा जाने चलन थिएन। घटस्थापनाको दिनदेखि दशमीको दिनसम्म कुभिण्डो र अष्टमीमा बोकको बली दिने चलन थियो।
पूजा गर्नेले नभइ अर्काले काट्दिने चलन थियो। हाम्रो घरमा राता पूजा गर्दा बेलुकी ९ वटा चामलको रोटी ९ वटा बारा तथा फलफूल चढाउने चलन थियो।
बुबाले अर्थ लाइलाइकन हाम्रो घरमा सकेसम्म खरखर गर्नेभन्दा पनि अर्थ बुझीबुझी गर्ने चलन थियो।
चण्डी पाठ लिएर अर्थ बुझेर गर्ने। दसैंको दिनमा मामाघरमा जाने चलन हो। हरेक दिन कन्या पूजा गरेपछि नवमीको दिन पनि कन्यालाई पूजा र विशिष्ट लुगा सहित नगद दिने चलन थियो। पहिले पहिले हाम्रो घरमा कुमार पनि पूजा गर्ने चलन थियो।
अहिले कोरोनाले बाधा पर्यो होला तर आफ्नो धर्म छोड्न हुँदैन। मनोवैज्ञानिक रुपमा शान्ति पाउनको लागि पनि पर्वहरुले धेरै सहयोग गर्छन्। त्यसकारण सुरक्षित भएर सबैले दसैं मानौं। दसैंको शुभकामना।